'५ हजारको मात्र जिम्मा लिन्छु भन्न मिल्छ ?'- समाचार - कान्तिपुर समाचार
काठमाडौँ — जनयुद्धमा मारिएका १७ हजारमध्ये ५ हजारको मात्र जिम्मेवारी लिने भन्ने नेकपा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालको अभिव्यक्तिप्रति अधिकारकर्मीहरुले चिन्ता व्यक्त गरेका छन् ।
मुक्तिनाथ अधिकारीको १८ औं स्मृति दिवसको कार्यक्रममा बोल्दै उनीहरुले दाहालको भनाइले संक्रमणकालीन न्याय व्यवस्थामा संशय पैदा गरेको बताएका हुन् ।
कार्यक्रममा पूर्व सभामुख दमननाथ ढुंगानाले ५ हजारको मात्रै जिम्मा लिन्छु भनेर दाहालले के भन्न खोजेको भनी प्रश्न गरे । 'आयोगले बयान गर्दा भन्ने कुरा टुँडिखेलमा उभिएर किन भन्नुभयो बुझिएन,' ढुंगानाले भने, 'युद्धमा १७ हजार मारिए भनेर आयोगले उहाँलाई सोधेपछि जवाफ दिने कुरा हो । उहाँले १७ हजारको जिम्मा लिने कि ५ हजारको लिने बयान गर्दा भन्ने कुरा हो । अहिले टुँडिखेलमा उभिएर किन भन्नुभयो बुझिएन । शायद अब आयोग नै गठन गर्नुपर्दैन भन्या हो की ?’
ढुंगानाले जुनसुकै हालतमा पनि आयोग गठन हुनुपर्ने र कानुनमा पनि संशोधन गर्नुपर्ने बताए । 'राष्ट्रिय कानुनको दायरमा आउने कि अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको दायरमा आउने त्यतीमात्रै बाँकी हो । यो छान्ने काम उहाँहरुको हो,’ उनले भने । सत्तारुढ दलले युद्धपीडितहरुलाई थकाउनका लागि आयोग गठनमा ढिलाई गरिरहेको आरोपसमेत उनले लगाए । कारबाही छल्न, प्रमाण लोप गर्न र युद्ध पीडितहरुलाई थकाउन लागेका भए पनि त्यो स‌ंभव नभएकाे उनले बताए ।
‘उहाँहरु कारबाही प्रकृया छल्नका लागि प्रमाण लोप गर्न लाग्नुभएको छ । युद्धपीडितहरुलाई थकाउनका लागि लाग्नुभएको छ । त्यो सम्भव छैन । सत्तारुढ दलले त्यो गरे पनि अन्तर्राष्ट्रिय कानुनले मान्ने छैन । त्यसकारण उहाँहरु राष्ट्रिय कानुनको दायरामा आउनुपर्छ उहाँहरुलाई नै राम्रो हुने छ । उहाँले आयोगमा बयान दिनैपर्छ । नदिई सुखै छैन । बयान गर्नुहुन्न भने उहाँहरुले अन्तर्राष्ट्रिय कठघरामा बयान गर्नुपर्छ,’ ढुंगानाले भने ।
राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगका सदस्य प्रकाश वस्तीले नेताहरुको कार्यशैली देखेर डराउनुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको बताए । सर्वोच्चको न्यायाधीश नियुक्त आफूले गरेको भनेर मुद्दाको मिसिल मगाइ निर्णय गर्लान् कि भनेर डराउनुपर्ने अवस्था आएको उनले बताए । ‘नेताहरुको अवस्था देखेर अहिले मलाई डर लागिरहेको छ । म काँप्ने गरिरहेको छु । किनभन्दा सर्वोच्चमा दर्ता भएको ‘क’ विरुद्ध ‘ख’ को मुद्दाकाे मिसिल यहाँ पठाइदेउ हामी नेताहरु निर्णय गर्छौ, सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष सबै मिलेर गरिदिन्छौं भन्न बेर छैन। यदि नेताहरुले यस्तो भने भने के होला आफैं कल्पना गर्छु म,’ उनले भने ।
‘सल्लाहकारहरुले हामीले किन नसक्ने ? ती न्यायाधीश नियुक्त गर्ने तपाईं नै हो । त्यो न्यायाधीशले गरेको काम तपाईंले गर्दा किन नहुने ? न्यायाधीशभन्दा ठूलो तपाई भन्दिन बेर छैन्,’ वस्तीले भने ।
सर्वोच्च अदालतका पूर्व न्यायाधीश केदारनाथ उपाध्यायले राजनीतिक दलका नेताहरुको सहमतिमा कस्तो आयोग गठन हुन्छ भन्दै चिन्ता व्यक्त गरे । न्याय दिनुपर्ने व्यक्तिको पीडा नबुझी, उनीहरुलाई नसोधी गठन हुने आयोगले दिने नीराकरण कस्तो हुने ? यो आयोगको विश्वसनीयता कसरी पाउँछ भन्दै उनले प्रश्न गरे ।
अधिकारीको १८ औं स्मृति दिवसमा 'शान्ति प्रकृयाको १३ वर्ष सशस्त्र द्वन्द्वका पीडितलाई सत्य, न्याय र परिपुरण सुनिश्चित गर्नमा राज्यको उदासिनता कहिलेसम्म ?' विषयक अन्तरक्रिया एमेनेस्टी इन्टरनेसनल नेपाल र मुक्तिनाथ अधिकारी स्मृति फाउन्डेसनले आयोजना गरेका थिए।
प्रकाशित : माघ ३, २०७६ २०:५९
माघ ३, २०७६ एजेन्सी
तेहरान — इरानका सर्वोच्च नेता आयातोल्लाह अली खामेनीले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पलाई ‘जोकर’ को संज्ञा दिएका छन् ।
राजधानी तेहरानस्थित मोसल्ला मस्जिदबाट शुक्रबार ८ वर्षपछि सार्वजनिक सम्बोधन गरेका खामेनीले इरानका जनतालाई समर्थन गरेजस्तो देखाउने ट्रम्पलाई ‘जोकर’ भनेका हुन् ।
अमेरिकी हवाई हमलामा मारिएका उच्च सैन्य कमान्डर कासिम सुलेमानीको अन्तिम संस्कारमा लाखौं सहभागी हुनुले इरानी जनताले इस्लामिक गणतन्त्रको समर्थन गरिरहेको प्रस्ट भएको सम्बोधनका क्रममा खामेनीले बताए ।
इस्लामिक स्टेट समूहविरुद्धको लडाइँमा अति प्रभावशाली सैन्य नेतृत्व गरेका सुलेमानीलाई अमेरिकाले जनवरी ३ मा ‘कायरतापूर्वक हत्या गरेको’ उनले आरोप लगाए । उनको हत्याको बदलामा इरानले इराकस्थित अमेरिकाका दुई सैन्य आधार शिविरमा कैयौं ब्यालेस्टिक क्षेप्यास्त्र प्रहार गरेको थियो । यद्यपि सो आक्रमणबाट कुनै ठूलो क्षति नभएको वासिङ्टनको दाबी छ । इरानले प्रहार गरेको क्षेप्यास्त्र ‘आफूमात्रै विश्वको शक्ति सम्पन्न राष्ट्र हौं’ भन्ने अमेरिकी इज्जतमा प्रहार भएको उनको भनाइ छ ।
शुक्रबारको प्रार्थनापछि सर्वोच्च नेता खामेनीले विरलै गर्ने सम्बोधनमा अमेरिकालाई मध्यपूर्वबाट फिर्ता पठाएपछि मात्रै ‘वास्तविक सजाय’ दिइएको हुने बताए ।
सम्बोधनका क्रममा उनले देशको शक्तिशाली सेनाको समर्थन पनि गरेका छन् । इराकमा क्षेप्यास्त्र हमला गरेकै युक्रेनी यात्रुवहाक विमानलाई ‘भूलवश’ खसालेको भन्ने इरानी सेनाको भनाइलाई ‘झूटो’ रहेको भन्दै तेहरानमा प्रदर्शन भइरहेकै बेला खामेनीले सेनाको बचाउ गरेका हुन् ।
‘भूलवश’ भएको भनिएको हमलाका कारण युक्रेनी ध्वजाबाहक विमानमा सवार चालक दलसहितका १ सय ७६ जना सबै यात्रुको मृत्यु भएको थियो, जसमा अधिकांश यात्रु इरानकै थिए ।
विमान खसेको तीन दिनसम्म इरानी प्रशासनले प्राविधिक कारणले दुर्घटना भएको भन्दै हमला नगरेको दाबी गरिरहेको थियो । पश्चिमा राष्ट्रले इरानले नै युक्रेनी विमान खसालेकोबारे प्रमाण रहेको बताएपछि मात्रै सेनाले ‘गम्भीर मानवीय त्रुटिका कारण भूलवश विमानमा क्षेप्यास्त्र आक्रमण भएको’ स्वीकार गरेको थियो ।
झूटो बोलेको भन्दै तेहरानलगायतका क्षेत्रमा प्रदर्शन भएपछि सरकारले बल प्रयोग गरेको थियो । शुक्रबारको सम्बोधनमा खामेनीले पनि ‘विमान खसाल्नु एउटा तितो दुर्घटना भएको’ र यसले जति शत्रुलाई खुसी बनाएको छ, त्योभन्दा बढी इरानी जनतालाई दुःखी बनाएको बताएका छन् ।
विमान खसालिएको विषय शत्रुहरुले इस्लामिक गणतन्त्र, रिभोलुस्नरी गार्ड र सशस्त्र फौजविरुद्ध प्रश्न गर्न प्रयोग गरेको उनको जिकिर छ । ‘इरानी जनतालाई घुँडामा टेकाउन’ पश्चिमा राष्ट्रहरु अति नै कमजोर रहेको उनले बताए । सन् २०१५ कै आणविक सम्झौताका बुँदाहरुमा इरानलाई टिकाइराख्न यसै साता विवाद संयन्त्र घोषणा गरेका बेलायत, फ्रान्स र जर्मनी अमेरिकाको ‘दास’ भएको आरोप पनि लगाए । उनले अमेरिकाबाहेक अन्य राष्ट्रसँग वार्ता गर्न इरान तयार रहेको बताए ।
खामेनी सन् १९८९ देखि इरानी शक्तिको केन्द्रमा छन् । उनको अन्तिम भनाइ नै देशको निर्णय हुन्छ । जनरल सुलेमानीको अन्तिम संस्कारमा खुला रूपमा रोएका ८० वर्षीय खामेनीले शुक्रबारको सम्बोधनमा पनि अमेरिकाविरुद्ध ‘कडा बदला लिने’ प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन् ।
शुक्रबारको प्रार्थनमा हजारौं इरानी सहभागी भएका थिए । उनीहरुले अमेरिकाविरुद्ध नारा पनि लगाएका थिए ।
विश्वका ६ शक्तिशाली राष्ट्र र इरानबीच उसको आणविका कार्यक्रम रोक्ने र त्यसका लागि उसविरुद्धको प्रतिबन्ध हटाउने विषयमा भएको आणविक सम्झौताबाट सन् २०१८ मा अमेरिका एक पक्षीय रूपमा बाहिरिएर थप प्रतिबन्ध लगाएपछि दुई देशबीच तनाव बढेको हो ।
अमेरिकी प्रतिबन्धका कारण पछिल्लो समय इरानको अर्थतन्त्र डामाडोल भएको र यसले उसको मुद्राको मूल्य पनि घटेको छ ।
प्रकाशित : माघ ३, २०७६ २०:४९